Vatinoshanda navo - Motio
musha 9 About 9 Partners Our
Motio yakamisikidza rongedzero yevakabatana pasi rese vanopa masevhisi, kudzidziswa, kuisirwa, uye ruzivo rwekuchinjisa.
Tsvaga Partner neAnalytics Vendor
Sarudza yako BI chikuva kuti uwane mumwe wedu wepasirose vatinoshanda navo mudunhu rako.
Mhinduro dzeQlik Sense dzinosanganisira zero-yekubata vhezheni yekudzora, nyore deployments, odhita-yakagadzirira kutevedzera, munyori kubatana, uye nezvimwe!
Mhinduro dzeTafura - Kuuya nekukurumidza!
Mhinduro dzeSimba BI - Kuuya munguva pfupi!
Joinha Wedu Partner Network